Madaxweynaha Ruushka oo markale Dayib Erduqaan ka badbaadiyay siyaasad qalafsan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Madaxweynaha Ruushka oo markale Dayib Erduqaan ka badbaadiyay siyaasad qalafsan
Laba usbuuc kahor ayay ahayd markii Dayib Erduqaan ciidan iyo hub u direy Liibiya si uu ula dagalamo jeneraal Khaliifa Xaftar oo ka taliya Liibiya inteeda badan dhawaan qabsaday magaalada Sirta.
Waxa looga digey dhiiga uu daadinayo ee Liibiya iyadoo ujeedadu tahay aad heshid saliid iyo weliba taageerida urur diimeedka Akhwaan Muslimiin ee ay kuwada jiraan isaga iyo hogaamiyaha Tiriboli fadhiya.
Kadib wadahadal bilow ah oo Ruushku dhexdhexaadinayo ayaa labada dhinac ee Khaliifa Xaftar iyo Siraaji oo Erduqaan taageero uga furmey caasimada Ruushka ee Mooskova.
”Horaan uga digney waar dhiig Muslim hadaadin ayuu yiri hogaamiyaha mucaaradka ee Turkiga. Madaxweynaha Ruushka oo hore Erduqaan uga badbaadiyay dhiig uu ku daadiyo Suuriya qaasatan Kurdiyiinta, ayadoo aan ognahay inuu dhiig badan oo reer Suuriya ah daadiyay, aya markaana xal u keenay Liibiya.
Wadahadalada ka dhacaaya Ruushka waxa ku qasban Erduqaan aqbalo inuu aqbalo haddii kale qasaare ayuu ku jiraa maadaama uuna haysan saaxiib kale oo daacada.
Muxuu dhigayaa qodobada heshiiska ee Mooskova
Heshiisku wuxuu dhigayaa in xabad joojin la sameeyo bilaa shuruuda kadibna la sameeyo guddi u kala dab-qaada labada dhinac ee dawladaha Carabta iyo Turkigu kala taageersan yihiin ee Khaliifa Xaftar ityo Siraaji.
Wasiirka arimaha dibedda ee Ruushka ayaa qaba in dhamaan dhinacyadu saxiixi doonaan heshiiskan beri kadibna loo dareero shirweyne lagu lafoguro dejinta dalka oo ka dhaca Jarmalka.
Dayib Erduqaan ayaa ku duceysanaya in madaxweynaha Ruushku dejiyo jeneraal Khaliifa Xaftar si Meesha ay u sii joogto hogaanka uu tageersan yahay ee Tiriboli jooga.